ထုတ်လုပ်ရေး - Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> ထုတ်လုပ်မှု
OKR English Objectives & Key Results မှဆိုလိုသည်မှာရည်ရွယ်ချက်နှင့်အဓိကရလဒ်များသည်အစီအစဉ်ချနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
၎င်းကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ စက်မှု (သို့) ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တွင်သာမကကိုယ်ပိုင်အဆင့်တွင်လည်းကောင်းသုံးသည်။ ဟုတ်သည်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေရန်၊ အဓိကအလုပ်များကိုအာရုံစိုက်ပြီးလျင်မြန်စွာကြီးထွားရန်အလွန်ကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ပန်းတိုင်ကိုအခြေခံသည်မဟုတ်။ ပန်းတိုင်များသည်ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာတစ်ခုကိုအတိအကျ သတ်မှတ်၍ တိုင်းတာနိုင်သည်။
နည်းလမ်းများစွာရှိသော်လည်းယခုအချိန်ထိမမြင်ဖူးသေးပါ JITမော်တော်ယာဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းမှဆင်းသက်လာသည်၊ အားလုံးသည်ဤကဏ္fromမှလာသည်မဟုတ်။ အခြားသူများသည်လည်းဤကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းအတွက်ကြီးကြီးမားမားပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည် CMI နှင့်အတူ semiconductor အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် (Balanced Scoreboard) သို့မဟုတ် BSC (Balanced Scoreboard)
စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံတစ်ခုသည်မဟာဗျူဟာကို ဦး တည်စေသောညွှန်ကြားချက်တစ်ခုဖြစ်သည် ဆက်စပ်သောပန်းတိုင်များ တစ်ခုစီ ဤပုံစံ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးတွင်လိုက်နာရမည့်မဟာဗျူဟာကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်၊ ၎င်းသည်စီးပွားရေး / ငွေကြေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အနီး၊ အလယ်၊ သို့မဟုတ်ဝေးသောနေရာတွင်ဖြစ်စေ။
ဘယ်ကမ္ဘာမှာလဲ optimization နှင့်ထိရောက်မှု အကန့်အသတ်ရှိသောအရင်းအမြစ်များ၊ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာများကြောင့်အလွန်လိုအပ်လာသည်၊ အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုပမာဏသည်လိုအပ်သည်ထက်ပိုနေသည်။ ပြီးတော့ဒါက Lean Manufacturing models တွေကစားတဲ့နေရာမှာပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်များတွင်ဆုံးရှုံးမှုများကိုလျှော့ချနေစဉ်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်လာလိမ့်မည်။
၎င်းသည်သင်အားအစိမ်းရောင်အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်သင့်ကိုယ်သင်ရောင်းချနိုင်သဖြင့်၎င်းသည်နောက်ဆုံးဖောက်သည်အတွက်ထပ်တိုးတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်သည် သုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်ပမာဏကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသည် အရည်အသွေး (သို့) နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုမထိခိုက်စေဘဲလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း
CREATOR: GD-jpeg (IJG JPEG, v1.0 သုံးပြီး) v80, အရည်အသွေး = 90
များစွာသောကုမ္ပဏီများသည်ရောင်းအားမြှင့်တင်ရန်၊ ထိရောက်သောစျေးကွက်လှုံ့ဆော်မှုများဖန်တီးခြင်းအတွက်သူတို့၏အားထုတ်မှုများကိုအာရုံစိုက်နေကြသည်။ ဒါကအပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများသည်ဤလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားတွင်ငွေအမြောက်အမြားကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်။ လောလောဆယ်တွင် Big Data နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သုံးသော software မှတဆင့်စုဆောင်းထားသောဒေတာများနှင့်အတူအမှန်တကယ်ထိရောက်သောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါတောင်မှကြော်ငြာတာကအရာအားလုံးမဟုတ်ဘူး MRP ကဲ့သို့အလွန်အပြုသဘောဆောင်သောအခြားနည်းလမ်းများရှိသည်.
MRP ဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည် ပိုရောင်းစရာမလိုဘဲလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့အမြတ်အစွန်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအရေအတွက် ဤအရာသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပုံရသော်လည်း၎င်းသည်မဟုတ်ပါ။ ဤနည်းဗျူဟာများသည်ထုတ်ကုန်များ၏တန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်လည်းမယှဉ်ပါ၊ ၎င်းသည်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း၌များစွာထိခိုက်စေနိုင်သည်။ MRP ကျင့်စဉ်များသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော ဦး တည်ချက်သို့သွားနေသည်။
SGA သို့မဟုတ် WMS
စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ကုမ္ပဏီမှဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်စွက်ဖက်သောရှုထောင့်တစ်ခုစီအတွက်အဖြေများလိုအပ်သည်။ ဒါကကုန်ထုတ်လုပ်မှုကနေထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထိသွားပြီးဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုကနေတစ်ဆင့်သွားရတယ်။ လောလောဆယ်၊ SGA ဆော့ဝဲ (သိုလှောင်ရုံစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်) သည်ဤသိုလှောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုကုန်ကြမ်းသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်အတွက်အလိုအလျောက်နှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ခွင့်ပြုသည်။
အခါများစွာ၌ WMS သည်အတွင်း၌သီးခြား module တစ်ခုသို့မဟုတ် function တစ်ခုအဖြစ်လာသည် ERP ဆော့ဝဲ Que ငါတို့သည်ယခင်ဆောင်းပါး၌ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမရ။ သို့သော်စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးသည်ပြီးပြည့်စုံသော ERP ကိုမလိုအပ်ဘဲ၎င်းတို့၏ဂိုဒေါင်များအတွက်သီးခြား software ကို သုံး၍ အတန်ငယ်ပိုမိုပျော့ပြောင်းသောဖြေရှင်းနည်းများကိုရွေးချယ်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ၊ ဒီဆော့ဝဲရဲ့သော့တွေ၊ ဝိသေသလက္ခဏာတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဆိုတာဒီနေရာမှာငါဆုံးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပါ့မယ်။
ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့အားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ အရင်းအမြစ်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း၊ စာရင်းကိုင်၊ ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအားစီမံခန့်ခွဲသည့်တာဝန်များကိုထိရောက်စွာနှင့်လျင်မြန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်သောရိုးရှင်းသောစနစ်များလိုအပ်သည်။ ဒါကိုလုပ်ဖို့သုံးတာအကောင်းဆုံးပါ ERP စနစ်များ၊ ဆိုလိုသည်မှာကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဤကိရိယာများအားလုံးကိုအကောင်အထည်ဖော်သော modular software တစ်ခုဖြစ်သည်.
ဤဆော့ဝဲအမျိုးအစားဖြင့်သင်သည်ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်သောဤဒေတာအပြောင်းအလဲကိုအလိုအလျောက်ချောမွေ့စေရုံသာမကထိုဒေတာအားလုံးကိုပေါင်းစည်းရန်၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုချိတ်ဆက်ရန်လည်းခွင့်ပြုသည်။ analysis လုပ်ရတာအရမ်းလွယ်တယ်မရ။ သို့သော်အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အသင့်တော်ဆုံး ERP system ကိုရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများနှင့်အရွယ်အစားအားလုံးသည်တူညီသော software အမျိုးအစားမလိုအပ်ပါ။
El အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ၎င်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းများအောက်တွင်ချမှတ်ထားသောအခြားစံများနှင့်စံနှုန်းများနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ထုတ်လုပ်သူများလိုအပ်ခြင်းကြောင့်သာမက၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုများကြားတွင်ရွေးချယ်စရာပိုများလာသောသုံးစွဲသူများကိုကျေနပ်စေရန်နှင့်စျေးကွက်အတွင်းရှိထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုပိုမိုသိရှိလာကြသည်။
ထို့ကြောင့်၊ ထုတ်လုပ်သူကိုယ်တိုင်သည်သူ၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ကိုက်ညီရန်သေချာစေရမည် အခြေခံစံနှုန်းများနှင့်လုံလောက်သောအရည်အသွေးတို့ဖြစ်သည် ပျော်ရွှင်သောဖောက်သည်များ (သစ္စာရှိမှု) ရှိရန်။ ထို့အပြင်ဤအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများသည်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးတက်စေရန်ကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ကျရှုံးမှုများ (သို့) ပြန်လည်ရရှိသောကုန်ကျစရိတ်များကိုသက်သာစေသည်။
Toyota သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးမော်တော်ယာဉ်ကဏ္inတွင် ဦး ဆောင်သူတစ် ဦး လည်းဖြစ်သည်။ သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ ဂျပန်စက်ရုံများသည်၎င်းတို့၏ထိရောက်မှုနှင့်အသုံးချနည်းများကြောင့်ပေါ်လွင်သည်။ ဤမျှလောက်များစွာသောနည်းလမ်းဟုခေါ်သည်။တိုယိုတာနည်းလမ်း” (သို့မဟုတ်တိုယိုတာထုတ်လုပ်မှုစနစ်၏ TPS) ကိုစက်မှုနှင့်မော်တော်ယာဉ်ကဏ္ within အတွင်းမှကျန်စက်မှုလုပ်ငန်းများကလက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဤအလုပ်လုပ်ပုံနည်းလမ်းသည်မည်မျှထိရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်စေသည်။
ဤနည်းလမ်းကိုပိုမိုယေဘူယျအားဖြင့်ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည် JIT (အချိန်မီ) သို့မဟုတ်အချိန်မီမရ။ ပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကဘာအတွက်လဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းဖော်ပြတယ်။ သင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်အတိုင်း၎င်းသည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းများပေးပို့ပုံကိုအခြေခံသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုမရပ်တန့်နိုင်အောင်သင်၏စွန့်ပစ်ခြင်းတွင်လိုအပ်သောအရာများအမြဲရှိသည်။
ဤနည်းလမ်းဖြစ်လာသည် အရမ်းထိရောက်တယ် အချို့ကိစ္စများတွင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကို၎င်းတို့တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထုတ်လုပ်ပြီးကားများနှင့်အခြားထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်များတွင်စုထားပြီးဖြစ်သည်။ အမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုကဏ္inတွင်ထိရောက်မှုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်စံအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။